Mwedzi Wechirangaridzo Wakatarisana Navo Linksys Router? - Semalt Inoziva Maitiro Okugadzirisa Dambudziko Iri
Pane kurwisa kwemarware kune zita rokuti "Mwedzi" iri kurwisana navaritori vekodha saLionsys. Iyi malware ine mikana yekukanganisa hurumende yekuchengetedza yemakombiyuta nekufambisa panzvimbo yevashandi.
Semalt Mutevedzeri weVatengi vanobudirira, anotaura kuti vashandisi veLidysys, pamwe chete nemafungiro avo asina ruzha, vanotarisana nekushungurudzika uku uye izvi zvinogona kuita kuti webhusaiti yako kana vatengi vave nekutasikirwa kukuru nekuti chekunyengedza internet.
Malware yeMwedzi inowana simba rayo kubva nenzira iyo inopfuurira kuvimbiswa - restaurant appraisals. Inoita kuti zvikwanise kuvhara pasina kuve nenhaka yezvinyorwa zve admin. Paanotarisana nehutachiona hwehutachiona, Rouys Linksys inotanga kutakura ganda rose nematokari akawanda 80 uye 8080 mhirizhonga. Ikoko kune migumisiro mune zvimwe zvinhu zvakanyanya zvekuita basa, zvichiita kuti internet yako ishandise kutengesa. Makombiyuta anogona kuwana utachiona hunoitawo kuti hutungamirire uye CPU inoshanda zvishoma.
Nzira yekudzivirira sei Mwedzi Malware
Mwedzi malware inopesana nekuchengetedzwa kwekombiyuta. Somugumisiro, nguva dzose inokosha kusanganisira nzira kana chirongwa chekubvisa chirwere ichi kubva pamusara. Kune dzimwe matanho izvo vanhu vanogona kutevera kuti vazvibudise:
Tsvaga pawebhu yakagadzirirwa kuiswa kwe router. Zvakakosha kushanyira webhusaiti yavo uye kuwana ruzivo rwakadai semuenzaniso, serial number, IMEI pamwe nemamwe mashoko akakodzera..Mamwe mabhuta ane chibatanidzo ichi kumashure kwepane yavo.
Iva nechokwadi chokuti rousti yako Linksys ine inewareware yakapedzisira. Kana zvisingaiti, kuita unopfuura-in-air update kana firmware flash inogona kugadzirisa nyaya iyi. Linksys kambani inoramba ichivandudza firmware kuti irwise dzimwe nzira dzinotyisa dzinogona kupinda mukati.
Enda kuhutungamiri tab. Bhuku rehutungamiri iri pamusoro pekona yepamusoro pakatarisana neve firmware version mabhuku. Kuva ne-firmware yakapedzisira, tora iyi tab kuti uende kune imwe danho rinotevera. Iva nechokwadi chokuti iyo iri pabhokisi rekutarisa rekuchengetedza kwakasununguka, cheki yandinoisa kune "akaremara."
Kubvira pano, chengeta Tsvaga tab. Iyi danho nderokuti iwe unowana humwe hutano hwekuita zvimwe zviyero zvekuchengetedza zve router yako. Tarisa Filter Anonymous Internet Zvinyorwa zvinosarudza. Kana yakatova mukusarudza, iwe unogona kuisiya iyo nenzira iyo. Zvimwe zvezvinobudiswa neZ Linksys firmware zvinogadzirisa izvi nekusara.
Chengetedza zvirongwa zve router. Mushure mekuponesa zvigadziriswa, zvakakosha kusimbisa router. Kuti uite izvi, chivhara kubva kune simba rekugadzirisa uye uibudise zvakare. Sechigumisiro, router inosasa cache. Iyo inobvisawo iyo malware iyo inogona kunge yakashanda.
Kuvapo kwekarware mu router yako kunogonawo kuita kuti kuchengetedzwa kweruzivo rwekutsvaga kwako kunetseke. Zvakakosha kutarisa kuti rouketi yako ye Linksys yakachengetedzwa kubva kumagirusi. Dzimwe nzira dzekuona nekuchenesa malware kubva kune router ino dziri mumagazini ino. Nokugadzirisa router yako pamwe chete nekudzikisa cache nokutangazve kunogona kubatsira kubvisa mamwe malware. Iwe unogona kuita kuti ruzivo rwako rwekutsvaga ruve rwakachengeteka pamwe nekuita yako yekutengesa internet kuti ikurumidze.